PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - Isafa inesandla ekubhacazeni kwebafana
Isafa inesandla ekubhacazeni kwebafana
UKUNGAYI kwebafana Bafana emidlalweni yendebe yomhlaba ezokuba serussia ngonyaka ozayo kuyizinkomba zokudunguzela kobuholi besouth African Football Association (Safa) eholwa ngudanny Jordaan ongumengameli wale nhlangano ephethe unobhutshuzwayo waseningizimu Afrika.
Kulokhu kuvele njalo ukuthi izinto zilokhu zibheke eceleni selokhu izintambo zibanjwe yifootball Transformation Forum (FTF) esungulwe ngujordaan, u-alpha Mchunu, umandla “Shoes” Mazibuko nenkosi Mwelo Nonkonyane abebegqame kakhulu kuyona.
I-FTF ingene emandleni ngowezi-2009 ijuba ukirsten Nematandane njengomengameli oyisichuse sikajordaan. Yize ekhishiwe kwangena yena ngqo ujordaan kalukho nhlobo ushintsho kwibafana.
Nokho siyakuqaphela ukuthi amaqembu amancane esizwe enza kahle kakhulu ngaphansi kwakhe. Sesibuya emidlalweni yendebe yomhlaba yabaneminyaka engaphansi kwengama-20 ubudala kanti elabaneminyaka engaphansi kwengama-23 ubudala lidlale kuma-olympic Game abesebrazil nyakenye.
Nebhola labesifazane ubuholi bukajordaan buyazama ukulinakekela njengoba ibanyana ibiyingxenye yama-olympic futhi isanda kubuya nendebe yecosafa ezimbabwe. Kumqoka ukuthi kusungulwe iligi yezinga elikhokhelayo yabesifazane ukuthuthukisa lo mdlalo kuleli.
Yize sincoma okunye ngaphansi kukajordaan kodwa konke kufana nento esemgqonyeni nxa ibafana Bafana isaqhubeka nokuba yinhlekisa e-afrika ingasaphathwa uma ibalwa namanye amazwe aphesheya kwezilwandle.
Isafa yiyona eholele ekutheni singalubhadi kwindebe yomhlaba ngokuxosha u-ephraim “Shakes” Mashaba icikwa wukuthi akazi- khothamelanga izikhulu zale nhlangano epolowane. Inqola bekucaca ukuthi ibheke erussia ngaphansi kukamashaba yize ebebuye azehlise isithunzi ngokuxabana nabadlali nokudinelwa abezindaba.
Ngeke samahlulela ustuart Baxter ongene ezicathulweni zikaMashaba njengoba ethathe lo msebenzi seliyozilahla kunina. Ugadle zephuka naye.
Sesimincele ukuthi okungenani ubaxter aphumelele ukufaka ibafana kwi-african Cup of Nations (Afcon) njengoba singeke siwubeke umcondo erussia. Ujordaan ungumholi omuhle kodwa nxa engazifundisa ukulale- la imibono yabanye abantu ibafana ingaya kude kakhulu.
Ukufuna kwakhe ukuthi angaboniswa yikhona kanye okuholele ekutheni axebukwe ngabantu asungule nabo IFTF abebengayizwa eyokuba yizichuse zakhe. Kumanje IFTF inabantu abangayazi izimpande zayo njengoba beyijoyine ngoba sebebona ukuthi kunoju ngaphansi kukajordaan.
Njengakwipolitiki, ukwamukela kwakhe abantu abebengahambisani naye esikhathini esedlule kutolikeka ngokuthi ubelwela ukuzigcina esemandleni, encenge ivoti labo njengoba nabo bebegaqele ukuthola izikhundla ngaphansi kobuholi bakhe.